Dowlada Soomaaliya iyo Sweden oo hishiis iskaashi kala saxiiday -SAWIRRO – Radio Muqdisho
Dowlada Soomaaliya iyo Sweden oo hishiis iskaashi kala saxiiday -SAWIRRO
Wasiirka wasaarada qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah iyo madaxda laanta istaatiskada Sweden ayaa si wadajir ah u kala sixiixday hishiis mudo afar sano ah kaas oo Dowlada Soomaaliya ka caawin doonto go’aanada cilmga ku qotomo, sida tirakoobka dadka, iyo ilaha dhaqaalaha, waxaana hishiiskan ku baxaya malaayiin lacag ah.
Mashruucan ayaa ah mid muhiim u ah dowlada Soomaaliya marka la gaaro xilliga doorashooyinka taas oo guud ahaan la xaqiijin karo marka la helo tiro-koob sax ah, iyada oo hishiiskan uu sidoo kale qeyb ka yahay dib u dhiska xarunta istaatiskada ee wasaaradda qorsheynta Soomaaliya si loo gaarsiiyo guud ahaan dalka.
Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah mudane C/raxmaan Yuusuf Ceynta ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in hishiiskan uu yahay mid dib loo soo nooleeyey dhowr iyo labaatan sano kaddib maaddaama dowladda Sweden ay horay dowladihii dalka soo maray wixii ka horeeyey 1991dii ay ka caawin jirtay arrimaha istaatiskada , waxa uuna rajo wanaagsan ka muujiyey in dowladda iyo maamullada dalka ka jira ay ka faa’iideysan doonaan hirgalinta xaruntan.
Sidoo kale wasiirka Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah mudane C/raxmaan Ceynte waxa uu la kulmay Wasiirka horumarinta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Sweden Isabella Lövin, waxa ayna taageertay hishiiska cusub ee maanta sida rasmi ah Somalia iyo Sweden u kala saxiixdeen, iyada oo hishiiskan ku tilmaamtay in uu yahay mid sii xoojinayo xiriirka labada dal.
Mudane C/raxmaan Sh. Yuusuf Cali Ceynta Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa sidoo kale kulan ballaaran la qaatay hay’adda deeqaha iyo horumarinta caalamiga ah u qaabilsan sweden ee SIDA.
Dhageyso Barnaamijka Bandhigga Wareysiyada ee Radio Muqdisho 30 03 2015
Koox hubeysan oo Kampala ku toogtay Dacwad-Ooge